Funda malunga neTyala eliye laya ekudalweni kwe-Super PACs
Inkundla eyaziwayo kwaye ihlaziyiweyo ngokubanzi Abahlali baseUnited bavakaliswe indlela yokudala ii-PAC eziphezulu , amaqela ezopolitiko angama-hybrid avunyelwe ukuphakamisa nokuchitha imali engenamkhawulo wemali kwiinkampani kunye neemanyano ukuchaphazela ukhetho lwaseMelika.
Kodwa bekungekho na maPAC aphezulu ngaphandle komncinci owaziwayo, inkundla yenkwenkwezi nomngeni we-Federal Electoral Commission, i-SpeechNow.org v .
Iqela lezopolitiko ezingenzi nzuzo, elihlelwe phantsi kweCandelo leNkonzo yangaphakathi yeNgeniso ye-527, liye linceda kakhulu ekudalweni kwe-PACs njenge-Citizens United.
Isishwankathelo se SpeechNow.org v. FEC
I-SpeechNow.org ilandele i-FEC ngoFebruwari 2008 ithatha umyinge we-5,000 we-federal umda wokuba abantu banganikela ikomiti yezopolitiko ezifana neyabo, ngoko ke ukunciphisa ubuninzi bokusetyenziswa kwabaviwa abaxhasayo, babonisa ukuphulwa komgaqo-myalelo wokuQuqulwa kokuQala koMgaqo-siseko. inkululeko yokuthetha.
NgoMeyi ka-2010, iNkundla yesithili sase-US yeSithili saseColumbia yayilawula ngokubhekiselele kwi-SpeechNow.org, oku kuthetha ukuba i-FEC ayikwazanga ukunyanzelisa imilinganiselo yenkxaso kumaqela azimele.
Impikiswano kwiNkxaso ye SpeechNow.org
ISikole soBulungisa kunye neZiko lezoPhuhliso lwezoPolitiko, elimelela iNtetho yeNow.org, lathi imingcele yokuxhaswa ngemali yayikuphulaphulwa kwentetho yamahhala, kodwa kwakhona ukuba imithetho ye-FEC ifuna ukuba amaqela afanayo ahlele, abhalise aze athi " ikomidi yezopolitiko "ukwenzela ukukhuthaza okanye ukuchasene nabaviwa kwakunzima.
"Oko kuthetha ukuba ngoxa uBill Gates owodwa unokuchitha imali eninzi njengoko wayefuna ukuthetha ngentetho yezopolitiko, unokuba negalelo elingama-5,000 kuphela kwiqela elithile elifanayo.Kodwa ekubeni iSihlomelo sokuQinisekisa sokuqala siqinisekisa abantu ilungelo lokuthetha ngaphandle komda, Kufanele kube nengqiqo yokuba amaqela abantu ngabanamalungelo afanayo.
Kubonakala ukuba le miqathango kunye ne-tape ebomvu yenza ukuba akunakwenzeka ukuba amaqela ommi azimeleyo aphakamise inkxaso-mali yokuqalisa nokufikelela kwabavoti ngokufanelekileyo. "
Ukuphikisa Against SpeechNow.org
Ingxabano ka rhu lumente nge SpeechNow.org yukuthi ukuvumela imali engaphezulu kwama-5,000 kwii-individual "ingakhokelela ekufikeleleni okukhethekileyo kwabanikeli kunye nefuthe elingathandekiyo kwabasemagunyeni." Urhulumente uthatha ulawulo olulawulwayo lwenzelwe ukuthintela inkohlakalo.
INkundla inqabile ukuba ingxabano, nangona kunjalo, emva kwesigqibo sikaJanuwari 2010 kwi- Citizens United, kubhala : "Naluphi na ukufaneleka kwezi ngxabano phambi kobuhlali beZizwe eziMnyama, ngokucacileyo abafanelekanga emva koMbutho weZizwe eziManyeneyo ... .Izibonelelo kumaqela enza kuphela azimele iindleko zingenakonakalisa okanye zidale ukubonakala kwenkohlakalo. "
Ukwahlukana Phakathi kweNtetho yeNow.org kunye nabemi beZizwe eziManyeneyo
Nangona ezi zimbini zifana kwaye zijongene neekomiti ezizimeleyo zenkcitho, inselelo yeNkundla yeNtetho ijolise kwiingxowa- mali ze- federal fundraising . IQumrhu leZizwe eziManyeneyo liphumelele umngeni kwimida yokuchitha imali kwimibutho, imibutho kunye nemibutho. Ngamanye amazwi, Intetho ngokujolise ekukhuliseni imali kunye nabemi beZizwe eziManyeneyo bajolise ekuchithweni kwemali ukuchaphazela ukhetho.
Impact ye SpeechNow.org v. FEC
Inkundla yeSithili yase-US yesigqibo seSithili sase-Columbia, ityala kunye neSigqibo seNkundla ephakamileyo yase- United States kwi- Citizens United , yabambisana indlela yokudala ii-PAC ezinkulu.
Ubhala uLyle Denniston kwi- SCOTUSblog:
"Nangona iinqununu zeZizwe eziManyeneyo zijongene necala lokuchitha imali yenkxaso-mali yenkampani , i- Talk SpeowNow yezinye iinjongo eziphakanyisiweyo. njengoko banako kwaye banqwenela ukwenza ukuxhasa okanye ukuchasana nabaviwa kwiofisi yombutho. "
Yintoni iNtetho yeNow.org?
Ngokutsho kwe-SCOTUSblog, iNtetho yakhiwa ngokukhethekileyo ukuchitha imali ukukhuthaza ukhetho okanye ukunqotshwa kwabaviwa bezopolitiko. Yayisungulwa nguDavid Keating, owayengowamaxesha ahamba phambili kwiqela lezityalo ezikhuselekileyo zeCandelo lokuKhula.
Kutheni Ufanele Ufunde I-Physics?
Indlela yokuhamba kwiLungu leLungu le-Ancestry Online: Isinyathelo ngesinyathelo
Ukuzingela Abazingeli EYurophu: Umhlahlandlela
Iphi na i-Golf yaqala nini na?
I-Biography: iMungo Park
Uxinzelelo lweTurgor kwiiSeli zeMithi
Abafazi kwiMfazwe Yehlabathi I: Iimpembelelo zentlalo
Ilanga kwi-Scorpio - Izibonakaliso zeZodiac